Eva ụfụfụ, Eva Yoga Wheel, Mgbucha Mgbu - wayfụfụ Parkway
Ụfụfụ Mpempe akwụkwọ
Xpe sere n'elu ute
Ndị na-ebu ogwe aka Smart Phone
N'úkwù echebe Series
EVA / Pee
Nke kwesịrị ekwesị n'ihi na akpakanamde ụlọ ọrụ, nkwakọ lining, n'ibu shockproof na ndị ọzọ ọrụ.
NBR ụfụfụ nwere ezigbo ire ọkụ ma na-ekpuchi ihe onwunwe, nke kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ ọ bụla ị nwere ike iche.
Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji elu-ọsọ okporo ígwè, akpakanamde, machining na-ewu ụlọ ọrụ.
AMT CONKWU EGO
Companylọ ọrụ anyị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhazi ụfụfụ na ngwa ọrụ. Nwere ike inwe obi ike iji nye ndị ahịa ọtụtụ ụdị ụfụfụ ngwaahịa ngwa ahịa gburugburu ebe obibi.
A na-ejikarị ya eme ihe na ụgbọala, ihe owuwu, nkwakọ ngwaahịa, ngwaahịa egwuregwu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Neoprene, nke a na-akpọkwa ụfụfụ CR. A na-arụpụta ya nke ọma ka ọ bụrụ roba dị nro, na-agbanwe agbanwe na iku ume ume.
MGBE, Ahịa NA Ọrụ bara uru
Dị ka ọkachamara na-emepụta nke bụ ọkachamara na mmepụta nke ụfụfụ ụfụfụ na ụfụfụ na-agbanwe, anyị nwere ọtụtụ igwe nhazi ụfụfụ iji mejuo ọchịchọ nke ndị ahịa si ụlọ ọrụ dị iche iche. Ihe karịrị afọ 20 na-emepụta ụfụfụ, na-enyere anyị aka ịnye ngwaahịa dị elu na ọrụ afọ ojuju maka ndị ahịa anyị.
Parkway ụfụfụ Co., Ltd. e guzobere na 2001 ma dị na Changzhou. Osisi ahụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 10, 000 na ikike mmepụta kwa afọ bụ mita cubic 30, 000. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta nke akwa ụfụfụ ụfụfụ (ụfụfụ ụfụfụ EVA, ụfụfụ PE, neoprene / CR, ụfụfụ EPDM) na ntụgharị ụfụfụ (laminating, ọnwụ ọnwụ, slicing, osise, wdg) ndị na-emepụta.
Ahụmahụ mmepụta bara ọgaranya Ngwa ọrụ nhazi ụfụfụ dị iche iche Hazie ngwaahịa dịka mkpa ndị ahịa si dị Ọnụahịa na uru ọrụ ndị ọzọ
Ahụmahụ mmepụta bara ọgaranya
Companylọ ọrụ anyị nwere 16-afọ akụkọ ihe mere eme, na nwere ahụmahụ oru otu na ahụmahụ ahịa otu
Ngwa ọrụ nhazi ụfụfụ dị iche iche
Anyị enwetawo igwe na akụrụngwa maka ịmịpụta ụdị ngwaahịa ụfụfụ dị iche iche iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa anyị
Hazie ngwaahịa dịka mkpa ndị ahịa si dị
Anyị ga-ahazi ọrụ na ngwaahịa ha chọrọ otu otu dịka mkpa dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche si dị. Kama ịre ngwaahịa dị iche iche.
Ọnụahịa na uru ọrụ ndị ọzọ
E jiri ya tụnyere ndị ahịa na ndị na-etiti, dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa ọnụahịa dị oke ọnụ, mana n'otu oge ahụ, anyị emegoro otu ndị pụrụ iche na ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi.
APFE 2020, Booth Mba 6A163
Auto Parts Ngosi gara
Asia ụfụfụ teepu anwụ-ọnwụ ọnwụ
East China Foreign Trade narị ndị agha ...
Adreesị: No.115 Caoshangcun Road, Qishuyan Street, Wujin District, Changzhou City Jiangsu Province China 213000
Copyright - 2019-2020: All Rights echekwabara. Atụmatụ - Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap
Kpakọba Camping ute, Agba agba n'úkwù, Foldable Xpe Camping ute, N'èzí Foldable Xpe Camping ute, Eriri na-agba agba, Mmiri na-agba agba,